Ithisisi ye-Bachelor, i-thesis ye-master, iphepha lekota | Ngoku bhala oonobumba abakhulu
Ukubhala ngesiporho. Ukubonisana. Iinguqulelo.
Kudala sinceda abafundi ukuba babhale ngaphezulu kweminyaka eli-18
Iithisisi zesidanga , Iithisisi eziyintloko , Umsebenzi wasekhaya
Ucela isibonelelo esingazibopheleli ukuze ufumane iindleko zomyalelo wakho.
Siza kuqhagamshelana nawe kwaye senze eyimfihlo kakhulu, eyenzelwe ngokukodwa
Emva kokufumana intlawulo encinci, umsebenzi uqala.
Uya kufumana ukuhanjiswa okwethutyana. Inyathelo 3 & 4 liphindaphindwe de umsebenzi ugqitywe ukoneliseka.
Amaxabiso kunye namaxesha okuhambisa
Sinceda ngamaphepha ekota, i-bachelor theses, i-master theses, imiboniso nokunye okuninzi!
ngayo 30 iintlobo zomsebenzi
Ngaphezulu kwe-600 Izifundo
Umsebenzi ocelwa rhoqo
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ze-7
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ze-14
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ze-21
Umphathi wakwazi ukufumana ulwazi oluyimfuneko kum ukuze umsebenzi uhambe kakuhle.
Hans	21 / 10 / 2021 ithisisi yesidanga
Inkqubo egqibeleleyo, andizange ndiyicinge ukuba ilula ngolo hlobo. Yonke into efomathiweyo ngokugqibeleleyo, imithombo enikiweyo, ucaphulo oluchanekileyo olwenziweyo kunye nephepha lokufaka elibandakanyiweyo.
Verena	23 / 08 / 2021 ithisisi yenkosi
Khange ndifune msebenzi uphela, iimpembelelo ezilungileyo kunye neesampulu njengetemplate- yiyo kanye le ndiyifumeneyo kwaye yandinceda kakhulu.
okokugqibela yinkonzo engakhuphi mali ezipokothweni zabafundi abahluphekileyo
ngovuyo kwakhona. Uncedo olulula nolukhawulezayo ndiyaluthanda
undikhuphe ngebheyile ngokuzayo ndiza kufika kwangoko
UFranchesko	29 / 09 / 2021
AmaPapernerds abonelela ngoncedo endilifunayo. Ndiyakwazi ukuxhomekeka, oko kwakubaluleke kakhulu kum.
I-Papernerds ayikuniki nje enye isebe esemgangathweni ethembekileyo eyakho Umsebenzi wendlu, ithisisi yesidanga okanye ithisisi yenkosikodwa enye umhleli onamava, eyona Inkonzo ebalaseleyo yokubhala ukuba.
Abahleli bethu bafanelekile ngokomsebenzi Izifundo nabahlohli abaqinisekisiweyo abaneminyaka emininzi yamava kwiindawo ezininzi zeengcali.
Ngqo & uqhagamshelwano ngokukhawuleza
Uhlala unxibelelana nabantu bethu abazimisele kakhulu Iqela lenkxaso. Inkonzo yabathengi ibaluleke kakhulu kwiPapernerds.
ukuqonda yeyona nto iphambili iphambili kwimipapernerds. Ukongeza kunxibelelwano olofihliweyo nolungaziwayo, sithobela ngqo ukukhuselwa kwedatha.
Ngaba ufuna uncedo ngomsebenzi wolwimi lwasemzini? Akhongxaki! Iqela lethu elinamava liya konwaba ukukucebisa ngolwethu Izifundo neelwimi.
Ungathembela kwimisebenzi yesayensi yePapernerds. Si izikhokelo ezisemgangathweni ezingqongqo kubabhali bethu. Akukho kukopa, akukho miphumo.
Owona mgangatho uphezulu
Yonke imisebenzi yesayensi iphicothwa ngumfundi wesibini ngokulungelelanisa nombhali. Isoftware yePlagiarism ikhangela ifayile ye- eyahlukileyo.
Ndingathanda ukuba umsebenzi wam ubhalelwe mna
Kubiza malini ukuba nephepha lezifundo elibhaliweyo?
Iindleko zomsebenzi ePapernerds ngokwendalo zixhomekeka kwindawo oza kubhalwa kuyo umsebenzi, luhlobo luni lomsebenzi, njengephepha lekota, ithisisi ye-bachelor okanye ithisisi yenkosi kunye nokuba mangaphi amaphepha, izingqinisiso, njl njl.
Kungoko kunzima ukwenza ingxelo echanekileyo malunga nexabiso lexabiso eliphantsi.
Nangona kunjalo, unokufumana i- Isicelo esingazibopheleli set okanye a Lungiselela ukubonisanaukucacisa yonke imibuzo kwangaphambili.
Ude ubhale nini amaphepha?
Konke kuxhomekeke: Kuxhomekeke kudidi lomsebenzi kunye nobunzulu bophando loncwadi, abahleli bethu banako Iintsuku 7-31 imfuno. Iphepha lekota elinamaphepha ama-5 linokubhalwa kwiintsuku ezisixhenxe, kodwa ithisisi yenkosi enamaphepha angama-60 ithatha ixesha elide.
Kuba i-papernerds ikwasebenza nababhali bokwenyani abavela kwiinkalo ezininzi zemfundo, kufanelekile ukuba ufumane iinkcukacha ngexesha elifanelekileyo, ngakumbi ngezizathu ezifanelekileyo yombuzo ukuhlangula.
Kuxhomekeke kubude bexesha, amalungiselelo ngamanye enokwenziwa apha.
Ngaba ndingayihlawula ithisisi yenkosi yam ngezavenge?
KwiPapernerds, ewe, unokukhetha ukuhlawulela ithisisi yenkosi yakho ngezavenge. Siyavuya uku Ukuhanjiswa kwenxalenye kunye neentlawulo ezithile lungisa.
Kodwa gcinani engqondweni ukuba umbhali unokwenza umsebenzi wakho ngokusisigxina wakube uhlawulwe ngokupheleleyo. Ngaphandle koko kuya kufuneka amkele ezinye izabelo phakathi ukuze akhusele umvuzo wakhe.
Zeziphi iziqinisekiso endinazo ngepapa?
Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukwenza umsebenzi wakho ngendlela endilisekileyo, ethobelayo kunye neelwimi.
Ngenxa yoku, sithembisa ukuba nawuphi na umsebenzi ngabasebenzi abanezakhono, njenge Abahlohli, Umphandi okanye Abahleli ibhaliwe emva koko yenziwa ngu Umvavanyi wenkohliso ihlolwe.
Ukongeza, umsebenzi owumiselweyo awusayi kusetyenziswa kupapasho lwakho ngalo naliphi na ixesha. Ke siyakuqinisekisa 100% ukuqonda kunye nomgangathowanelisekile. Siyaqhubeka siphucula de waneliseke.
Ngubani endinokuqhagamshelana naye ukuba ndinemibuzo?
Sinefayile ye- Uxhaso lwabathengi, onokuqhagamshelana naye nangaliphi na ixesha kunye nemibuzo ngokubanzi ngesihloko sephepha lekota, ithisisi ye-bachelor, i-master thesis njl.
Ukuba sele unonxibelelwano lokuqala nabasebenzi bethu, umhlohli, ugqirha okanye umphandi owabelweyo uya kuba secaleni kwakho.
Yeyiphi idatha oyifunayo kum?
Ewe kunjalo, lo mbuzo uxhomekeke kuhlobo, ubungakanani kunye nendawo yesifundo.
Ngokusisiseko, nangona kunjalo, olu lwazi lulandelayo luhlala lusinceda:
Inani lamaphepha kunye nemithombo yolwazi
ezinye iimfuno (iimvavanyo zakho, uphando, njl.
Umntu wakho onoxanduva uya kukuxelela ngokweenkcukacha ukuba ziziphi na izinto ozifunayo.
Zeziphi iinkonzo ozinikezelayo?
Siyakuxhasa kuzo zonke iinkalo zobomi bezemfundo:
Ukubhala ngu Umsebenzi wasekhaya, Iithisisi zesidanga, Iithisisi eziyintloko, Iifisisi ze-PhD kunye neengongoma
Ukuqeqesha ekunene Okwangoku
Uncedo nge Uphando loncwadi
Inkxaso nge Imibuzo malunga nokuqamba izicatshulwa zemfundo, Ukufomatha, Caphula, Uluhlu lweencwadi
Uncedo nge Uphando kunye neengcebiso ngesihloko
inkxaso kwimeko yeengxaki